စိန်လက်စွပ် (၃) ကွင်း နှင့် MPT ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ်များစွာတို့ ကို ကံထူးရယူနိုင်ဖို့ နေလဗေဒင် အက်ပလီကေးရှင်းအသုံးပြုလိုက်ပါ။ နေလ ဆိုသည်မှာ သုတ၊ ရသ၊ ဂမ္ဘီရ သတင်းအစုံအလင်ကို တစ်နေရာတည်းမှာစုံစုံလင်လင်ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများအား ကံကောင်းခြင်းများစွာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ် မှာဘယ်သူတွေပါဝင်လို့ ရနိုင်လဲ?
ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုပါဝင် လို့ ရနိုင်လဲ?
ပရိုမိုးရှင်း က ဘာဆုတွေပေးမှာလဲ?
ဆုမဲကံထူးသူစာရင်းကိုဘယ်လိုသိရမှလဲ ၊ ဘယ်ကကြေငြာပေးမှာလဲ?
ဗေဒင်ချစ်သူများအတွက် ကျင်းပပြုလုပ်ပေးသော “နှစ်ဦး” ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ နေလမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနေသော User များအတွက် ကျင်းပပြုလုပ်သောအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
(၂၀၁၉ ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ ရက်) မှ (၂၀၁၉ ဧပြီလ ၂၃ ရက်) ထိဖြစ်ပါတယ်။
နေလ ပရိုမိုရှင်းကို ၃လ ဆက်တိုက်ကျင်းပ ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမလ ၂၀၁၉ ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ ရက်မှ ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်ထိ၊ ဒုတိယလ ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်မှ ၂၀၁၉ မတ်လ ၂၃ ရက်ထိ၊ တတိယလ၂၀၁၉ မတ်လ ၂၄ ရက်မှ ၂၀၁၉ ဧပြီလ ၂၃ ရက် အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ ဒီဝန်ဆောင်မှုကို ရယူချင်တယ်ဆိုရင်
(၁) nl.lotayamm.com ကနေ တိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သလို
(၂) 8998 ကို DD ဆိုပြီး SMS ပေးပို့ခြင်းဖြင့်လည်း ဒေါင်းလုတ်လင့်ကိုရယူနိုင်ပါတယ်။
(၃) Google Play Store ကနေ လည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။
အက်ပလီကေးရှင်းကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ နေလအယ်ပလီကေးရှင်းကို ဖွင့်ပီး မိမိ MPT ဖုန်းနံပါတ်ကို ရိုက်ထည့် ကာ ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၀န်ဆောင်မှုကို ရယူရာတွင် MPT ဖုန်းနံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီးသည်နှင့် OTP code ကို ပြန်လည်ပို့ ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို OTP code ကိုရိုက်ထည့်ပြီးပါက နေလ အက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
နေလ၀န်ဆောင်မှုရယူထားသူ(အသစ်၊အဟောင်း)မည်သူမဆိုပရိုမိုရှင်းအစီအစဉ်တွင်အားလုံးပါဝင်နိုင်ပါသည်။ နေလ ၀န်ဆောင်မှု ကို တစ်လလျှင် အနည်းဆုံး ငါးကြိမ် ငွေပေးချေ အသုံးပြုထားသူများ ပရိုမိုရှင်းအစီအစဉ် တွင် ပါဝင်ခွင့်ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ပရိုမိုရှင်းအစီအစဉ် နှင့် ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ၀၉ ၈၉၉၈ ၄၀၀၀၇, ၀၉ ၄၂၀၈၀၅၆၆၇
ကျပ် (၁) သန်း တန် စိန်လက်စွပ် (၃) ကွင်း နှင့် MPT ၃၀၀၀ တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် အခု (၃၀၀) တို့ကို မဲနှိုက်ရွေးချယ် သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကံထူးရှင်ကို လစဉ် ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ကံထူးရှင် ကို (၁၄.၃.၂၀၁၉) ၊ (၁၄.၄.၂၀၁၉) ၊ (၁၄.၅.၂၀၁၉) တွင်ကြေငြာပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ကျပ် (၁) သန်း တန် စိန်လက်စွပ် (၃) ကွင်း အတွက် ဆုမဲကြေငြာအကြောင်းကြားသည့် ရက် မှ စ၍ တစ်လအတွင်း MPT ၏ ရုံးချုပ် မှာ ကံထူးရှင်ကိုယ်တိုင် မိမိ၏ မှတ်ပုံတင်နှင့် အတူ လာရောက်ထုတ်ယူပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃၀၀၀) ကျပ်တန် MPT ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် ကံထူးသူများကိုဆုမဲကြေငြာသည့် ရက်မှ စ၍ (၁) ပတ်အတွင်းဖုန်းငွေများလွှဲအပ် ချီးမြှင့် သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမလ ၂၀၁၉ ဇန်န၀ါရီလ ၂၄ ရက်မှ ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက် အတွင်း အနည်းဆုံး ၅ ရက် ငွေပေးချေအသုံးပြုထားသူများအား ကျပ် (၁) သန်း တန် စိန်လက်စွပ် (၁) ကွင်း နှင့် MPT ၃၀၀၀ တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် အခု (၁၀၀) တို့ ကို ၂၀၁၉ မတ်လ ၇ ရက်တွင် မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး မေတ္တာလက်ဆောင် ကျေးဇူးတုန့်ပြန်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုတိယလ ၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်မှ ၂၀၁၉ မတ်လ ၂၃ ရက် အတွင်း အနည်းဆုံး ၅ ရက် ငွေပေးချေအသုံးပြုထားသူများအား ကျပ် (၁) သန်း တန် စိန်လက်စွပ် (၁) ကွင်း နှင့် MPT ၃၀၀၀ တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် အခု (၁၀၀) တို့ ကို ၂၁၀၉ ဧပြီလ ၇ ရက်တွင် မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး မေတ္တာလက်ဆောင် ကျေးဇူးတုန့်ပြန်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမလ ကံထူးရှင်များလည်း ပါဝင် ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တတိယလ၂၀၁၉ မတ်လ ၂၃ ရက်မှ ၂၀၁၉ ဧပြီလ ၂၄ ရက် အတွင်း အနည်းဆုံး ၅ ရက် ငွေပေးချေအသုံးပြုထားသူများအား ကျပ် (၁) သန်း တန် စိန်လက်စွပ် (၁) ကွင်း နှင့် MPT ၃၀၀၀ တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် အခု (၁၀၀) တို့ ကို ၂၀၁၉ မေလ ၇ ရက်နေ့ တွင် မဲနှိုက်ရွေးချယ်ပြီး မေတ္တာလက်ဆောင် ကျေးဇူးတုန့်ပြန်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမလနှင့် ဒုတိယလ ကံထူးရှင်များလည် ပါဝင် ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ဆုမဲကံထူးသူစာရင်းများကိုနေလအယ်ပလီကေးရှင်း နှင့် နေလဖေ့(စ်)ဘွတ်တို့ မှတဆင့် ကြေငြာပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ ဖုန်းဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
What is promotion in NayLa Promotion?
When will promotion start?
Who is eligible in promotion program?
What prizes does the promotion give?
When day may you announce the prize?
When day may you give the prize?
How do you choose the prize?
How can we know winners and from where do you announce?
It is the promotion of NayLa’s “Initial Year” Promotion for astrology lovers. This is the program for users who use NayLa mobile application.
Promotion period is 24th January 2019 to 23th April 2019. We will celebrate the NayLa promotion3months continuously. Promotion will last First month (January 24 2019 to February 23 2019), Second month (February 24 2019 to March 23 2019) and Third month (March 24 2019 to April 23 2019).
All users who takeaNayLa service (new/old) can include in promotion program.
To takeaservice as users,
To take the service directly from nl.lotayamm.com
By sending SMS DD to 8998 to get the download link.
To get the application from Google Play Store.
After downloading the application, open the application and take the service by adding your MPT phone number. After inserting the MPT number, OTP code comes in. After inserting the OTP code, users can use the NayLa application.
All users who takeaNayLa service (new/old) can include in promotion program. Users have to successfully pay for the service at least5times for each month. To contact detailed – 09 8998 40007, 09420805667
We will draw (3) Diamond Ring which worth 1 million kyats and (300) MPT Top Up 3000 Kyats.
The winners will be selected every month and announcement will happen on 14.3.2019, 14.4.2019 and 14.5.2019.
The winners have to be taken out the winning prize by himself/herself with his/her original NRC Card within one month at MPT head office from the announcement date of getting the prize.
The users need to take the NayLa service.
The First Month, within January 24 2019 to February 23 2019, the users who apply to daily service by making payment at least5days will be rewarded one Diamond Ring which worth 1 million kyats and hundred number of 3000 Kyats MPT Mobile Top up by selecting with Lucky Draw on March 7.
The Second Month, within February 24 2019 to March 23 2019, the users who apply to daily service by making payment at least5days will be rewarded one Diamond Ring which worth 1 million kyats and hundred number of 3000 Kyats MPT Mobile Top up by selecting with Lucky Draw on April 7. The participants in first month of lucky draw will be still valid to be accountable in this round.
The Third Month, within March 24 2019 to April 23 2019, the users who apply to daily service by making payment at least5days will be rewarded one Diamond Ring which worth 1 million kyats and hundred number of 3000 Kyats MPT Mobile Top up by selecting with Lucky Draw on May 7. The participants in first and second month of lucky draw will be still valid to be accountable in this round.
We announce the winner from NayLa application and NayLa Facebook and also phone to winner.
ဤစာမျက်နှာသည်နေလနှစ်ဦးအထူးအစီအစဉ်(²Promotion²)တွင်ပါဝင်ကံစမ်းသည့်အခါ သင့်အနေဖြင့်လိုက်နာ ရမည့်စည်းကမ်းချက်များအား ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ Promotion အား မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (“MPT”၊ “ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ကျွန်ုပ်တို့ကို”၊ “ကျွန်ုပ်တို့၏”)က ဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် ရယူ နိုင်ပါသည်။ Promotion ကို Htut Co., Ltd. က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။Promotionတွင်ပါဝင်ကံစမ်းခြင်းဖြင့်သင်သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ နှင့်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့်အခြားသော သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များ (စုပေါင်း၍ “စည်းကမ်းချက်များ” ဟု ခေါ်ဆိုရန်) ကိုဖတ်ရှုပြီး နားလည်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ စည်းနှောင်မှုကိုခံယူရန် သဘောတူကြောင်း သဘောဆောင်ပါ သည်။
စည်းကမ်းချက်များသည် အချိန်အခါမရွေး ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခု ပြုလုပ်ပြီးနောက် Promotion တွင် သင်၏ဆက်လက်ပါဝင်ကံစမ်းမှုသည် ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်သော စည်းကမ်း ချက်များကို သင်က လက်ခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁.၁ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Promotion ကို Htut Co., Ltd. က အပြည့်အဝ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး Promotion နှင့်ပတ်သက်သည့် မည်သည့်စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းများ သို့မဟုတ် ကိစ္စရပ်များကိုမဆို Htut Co., Ltd သို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်သင့်ပါသည်။ Promotion တွင် MPT ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု အတိုင်း အတာသည် အောက်တွင်ထပ်မံရှင်းလင်းဖော်ပြမည့် ကျသင့်ငွေကောက်ခံခြင်း (Billing) နှင့် စာရင်းပေး သုံးစွဲခြင်း (Subscription) ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဖြင့် ကန့်သတ်ထားပါသည်။
၁.၂ စည်းကမ်းချက်များတွင် သင်အား အတိအလင်း အပ်နှင်းထားခြင်းမရှိသည့် အခွင့်အရေးအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့က သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများက သီးသန့် ရယူထိန်း သိမ်းထားပါသည်။ သင်အနေဖြင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဥပဒေတွင် ခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းသာ Promotion တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပြီး အခြားသောအသုံးပြုခံစားမှုအားလုံးကို တင်းကျပ်စွာ တားမြစ် ထားပါသည်။
၁.၃ MPT သည် MPT ၏ တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်း ပြချက်မရှိဘဲ သင်၏ Promotion သို့ ဝင်ရောက်မှု သို့မဟုတ် ပါဝင်ကံစမ်းမှုကို အကြောင်းကြားမှုနှင့် တာဝန်မရှိဘဲ အမြဲတမ်းသော်လည်းကောင်း၊ ယာယီသော်လည်းကောင်း ရပ်စဲခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်ခွင့်ပြုရန်ငြင်းပယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်သည့်အခါတွင် စည်းကမ်းချက်များသည် ဤတွင်ဖော်ပြထားသော ဆက်လက်တည်ရှိနေမည့်စည်းကမ်းချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် လိုအပ်သော အတိုင်းအတာအထိ သင်အပေါ် ဆက်လက်စည်းနှောင်မှုရှိရမည်။
၁.၄ Promotion တွင် သင်၏ ပါဝင်ကံစမ်းမှုသည် ကြိုတင်စီစဉ်ထားသောနှင့် ကြိုတင်စီစဉ်ထားခြင်းမရှိ သော ဝန်ဆောင်မှု အဆက်ပြတ်ခြင်းများပေါ် မူတည်နိုင်သည်။ Promotion ၏ အဆက်ပြတ်ခြင်း၊ (စီစဉ်ထားသည်ဖြစ်စေ၊ စီစဉ်မထားဘဲဖြစ်စေ) ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပေါ်ခြင်း သို့မဟုတ် မဝင်ရောက်နိုင် ခြင်းတစ်ခုခုအတွက် MPT သည် သင့်အပေါ် သို့မဟုတ် မည်သည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်မဆို တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်သည်ကို သင့်အနေဖြင့် သဘောတူပါသည်။
Htut Co., Ltd. သို့မဟုတ်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှအခြားနည်းဖြင့် တရားသဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ လွဲ၍ သက်ဆိုင်မှုရှိသည့်အတိုင်း ဤ Promotion နှင့်စပ်လျဉ်းသော ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ သရုပ်ဖော်မှုများ၊ လိုဂိုများ၊ တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှု အမှတ်တံဆိပ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂီတနှင့် အကြောင်းအရာ အပါအဝင် ၎င်းတို့ချည်းသာ မဟုတ်သော (စုပေါင်း၍ “အကြောင်းအရာ”) MPT ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အလက် တစ်ခုခုနှင့် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ဥာဏပစ္စည်းအခွင့်အရေးများ အားလုံးမှာ MPT နှင့် ၎င်း၏ အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊ အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့် အခြားသော အကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများ၏ သီးသန့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်အတိအလင်း ဖော်ပြ ထားသည်မှလွဲ၍ Promotion ၏ မည်သည့်အရာကမျှ ဥာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများတစ်ခုခု တွင်ရှိသော သို့မဟုတ် ထိုအောက်တွင်ရှိသော အသုံးပြုခွင့်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖန်တီးသည်ဟု မမှတ်ယူရ။ Promotion တွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်များတစ်ခုခု သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုမှ ဆင့်ပွားရရှိလာသော လက်ရာများကို ရောင်းချခြင်း၊ အသုံးပြု ခွင့်ပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ဆင့်ပွားကူးယူခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ပြသခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ဖျော်ဖြေခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ သင့်လျော် သလို ပြင်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်တီးခြင်းများကို သင့်အနေဖြင့် မပြုလုပ် ရန် သဘောတူပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များမှ အတိအလင်း ခွင့်ပြုမထားသော မည်သည့်ရည်ရွယ် ချက်အတွက်မဆို အကြောင်းအရာအားအသုံးပြုခြင်းကို တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။
၃.၁ Promotion ကာလသည် ၂၄ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၉ မှ ၂၃ ဧပြီ ၂၀၁၉ အထိ (²Promotion ကာလ²) ဖြစ်ပါ သည်။
၃.၂ Promotion တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ရန် သင်အနေဖြင့် နေလဝန်ဆောင်မှု ကို Promotion ကာလအတွင်း စာရင်းပေးသုံးစွဲရမည်။
MPT အနေဖြင့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်အတွက်လိုအပ်သော သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ဆက်စပ်သော ကိစ္စရပ်များအတွက်လည်းကောင်း၊ လူသိများစေရန်ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက် ပါဝင် ကံစမ်းသူများ၏ဗီဒီယိုများ နှင့်/သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအပါအဝင် ဖြစ်သော်လည်းယင်းတို့ ချည်းသာဟု ကန့်သတ်မထားသော MPT ၏ ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဈေး ကွက်ရှာဖွေရန်၊ ကြော်ငြာရန် နှင့်/သို့မဟုတ် အရောင်းမြှင့်တင်ရန် အလို့ငှာ ပါဝင်ကံစမ်းသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ကောက်ခံခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် ၎င်းတို့အကြား ဝေမျှခြင်းတို့ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် MPT၏တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်သက်ဆိုင်ရာ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များထံ ထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ခြင်းကို ပါဝင်ကံ စမ်းသူများက သဘောတူညီပြီး ခွင့်ပြုပါသည်။
သင်သည် MPT နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၊ ပူးတွဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူ၊ အေးဂျင့်များ၊ မန်နေဂျာများ နှင့် အခြားဆက်စပ်ကုမ္ပဏီများ၊ နှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ အေးဂျင့်များ၊ အရာထမ်းများ၊ ဒါရိုက်တာများအား (၁) သင်ထုတ်လွှတ်လိုက်သော သို့မဟုတ် ရရှိ သောဒေတာ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုအပါအဝင် သင်၏ Promotion အား အသုံးပြုခြင်း နှင့် ဝင်ရောက်ခြင်း (၂) ဤတွင်ပါဝင်သော ကိုယ်စားပြုတင်ပြခြင်းများနှင့် အာမခံချက်များတစ်ခုခုကို ချိုးဖောက်ခြင်း အပါအဝင် ယင်းတို့ချည်းသာမဟုတ်သော စည်းကမ်းချက်များ၏ စည်းကမ်းတစ်ခုခု အား ချိုးဖောက်ခြင်း (၃) ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေး တစ်စုံတစ်ရာ၊ လူတစ်ဦးတစ် ယောက်၏ ကျော်ကြားမှုကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာများအား အလွှဲသုံးစားပြုခြင်းကို ကာကွယ်သည့် အခွင့် အရေးများ (Publicity Rights) သို့မဟုတ်၊ ဥာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေး များ အပါအဝင် ၎င်းတို့ ချည်းသာမဟုတ်သော တတိယပုဂ္ဂိုလ်အခွင့်အရေးတစ်ခုခုကို သင့်အနေဖြင့် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ (၄) သင်၏ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်း တစ်ခုခုကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ (၅) Promotion မှတစ်ဆင့် သင်တင်ပြသော သို့မ ဟုတ် သင်ရရှိသော အချက်အလက်တစ်ခုခု၏ ရလဒ်တစ်ခုကြောင့် တောင်းဆိုမှု သို့မဟုတ် နစ်နာမှု တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် (၆) သင်၏ဖုန်းနံပါတ်(စာရင်းသွင်းထားသည်ဖြစ်စေ၊ စာရင်းမသွင်း ထားသည်ဖြစ်စေ)၊ ဟန်းဆက်၊ သို့မဟုတ် အခြားသော ကိရိယာမှတဆင့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဦး၏ Promotion သို့ဝင်ရောက်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုတို့မှ ပေါ်ပေါက်လာသော တောင်းဆိုမှုများ၊ နစ်နာမှု များ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တာဝန်ခံမှုများ၊ ကုန်ကျမှုများ သို့မဟုတ် ကြွေးမြီနှင့် အသုံးစရိတ် များ (ရှေ့နေ့ခများအပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားသော) တစ်ခုခု နှင့် အားလုံးထံမှနှင့် ၎င်းတို့ကို ဆန့်ကျင်၍ ကာကွယ်ပေးရန်၊ တာဝန်ခံမှုမှ ကင်းလွတ်စေရန်နှင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုမှ ကင်း လွတ်စေရန်သဘောတူပါသည်။
၇.၁ Promotion တွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် Promotion မှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲအပါအဝင်)နှင့် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကို ဤနေရာ၌ “ရှိသည့်အတိုင်း” နှင့် “ရှိနိုင် မည့်အတိုင်း” ရနိုင်သောစနစ်ဖြင့်ပံ့ပိုးခြင်းဖြစ်သည်။ MPT သည် Promotion လည်ပတ်ခြင်း သို့မ ဟုတ် Promotion တွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် Promotion မှတဆင့် အခြားနည်းဖြင့်သင်အသုံး ပြု နိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော ၎င်း၏တိကျမှုအပါအဝင်သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက် အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများကို မည် သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သော အတိအလင်းဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်စားပြု တင်ပြခြင်းများ သို့မဟုတ် အာမခံချက်များမပြုလုပ်ပါ။ သင်၏ Promotion အသုံးပြုမှုသည် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်ကို မိမိဘာသာတာဝန်ယူသည်ဟု အတိအလင်း သဘောတူပါသည်။
၇.၂ MPT သည် Promotion အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် Promotion တွင် ပါဝင်သော သို့မဟုတ် Promotion မှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသော ဝန်ဆောင်မှုများမှ ပေါ်ပေါက်လာသော မည်သည့်အမျိုးအစားမဆိုဖြစ်သည့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်သော၊ တိုက်ရိုက်မဟုတ်သော၊ ဆက်စပ်၍ဖြစ်သော၊ ပြစ်ဒဏ်အရဖြစ်သော နှင့်/သို့မဟုတ် အကျိုးဆက် အားဖြင့်ဖြစ်သော နစ်နာမှုများအပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟုကန့်သတ်မထားသော နစ်နာမှုတစ်စုံ တစ်ရာအတွက် တာဝန်ခံမည်မဟုတ်ပါ။
၇.၃ သင်အနေဖြင့် Promotion သို့ ဝင်ရောက်ကံစမ်းရာတွင်မည်သည့်အကြောင်းအရင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ Promotion နှင့်ဆက်စပ်၍ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ အကျိုးဆက်အရဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော မည်သည့် သဘောသဘာဝ သို့မဟုတ် အမျိုးအစားမဆိုရှိသည့် ဆုံးရှုံးမှု၊ ထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှု၊ ထိခိုက်မှု သို့မဟုတ် ပေးရန်တာဝန်ရှိမှုနှင့် အကျိုးဆက်များ တစ်ခုခုနှင့်အားလုံးမှ သော်လည်းကောင်း၊ MPT ကိုထိုသို့ဖြစ်နိုင်ခြေအား အသိပေးပြီးသည့်တိုင် Promotion တွင် ပါဝင်ကံစမ်းစဉ်အတွင်း သို့မဟုတ် ကံထူးဆုအား အသုံးပြုခံစားခြင်းမှ ပေါ်ပေါက်လာသော သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်သော မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်မဆို ထိခိုက်အနာတရဖြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ရပ်ရပ်အပေါ် ဖြစ် ပေါ်လာသည့်ထိခိုက်မှုတစ်ရပ်ရပ်အပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ယင်းတို့ချည်းသာဟု မကန့်သတ်လျက် ၎င်းတို့မှသော်လည်းကောင်း ပေါ်ပေါက်လာသောနှင့် ၎င်းတို့ကိုအကြောင်းပြုသော တောင်းခံမှု များ၊ တောင်းဆိုမှုများ၊ အခွင့်အရေးများ၊ တရားစွဲဆိုရန် အကြောင်းတို့မှ MPT အားကင်းလွတ်စေရန်နှင့် ရာသက်ပန် လွတ်ငြိမ်းစေရန် သဘောတူညီပါသည်။
၇.၅ Promotion တွင်ပါဝင်သော သို့မဟုတ် Promotion မှတဆင့်အခြားနည်းဖြင့် သင်အသုံးပြုနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသော သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ (ဆော့ဖ်ဝဲ အပါအဝင်) သို့မဟုတ် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများတွင် MPT ဆာဗာများ သို့မဟုတ် MPT မှ ပို့သောအီလက်ထရောက်နစ် ဆက်သွယ်မှုများသည် ဗိုင်းရပ်များ သို့မဟုတ် အခြားသော အန္တရာယ်ရှိသည့် အစိတ်အပိုင်းများမှ ကင်းလွတ်ပါသည်ဟု MPT က အာမခံခြင်း မပြုပါ။
Promotion တွင် Htut Co., Ltd. အပါအဝင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှ ရရှိသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့က ပံ့ပိုးပေး ထားသောအကြောင်းအရာ(²တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာ²)တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍အဆိုပါတတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာသို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းအရာ နှင့်ဆက်စပ်သောချိတ်ဆက်ထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုခုအတွက်MPTတွင်တာဝန်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏သတင်းအချက်အလက်၊ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများ တစ်ခု ခုအား ရည် ညွှန်းချက်သည် MPT က ထောက်ခံမှု၊ ကမကထပြုမှု သို့မဟုတ် အကြံပြုမှု မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ် ထိုသို့သွယ်ဝိုက်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
၂။ မှတ်ပုံတင်ထားသော MPTအသုံးပြုသူများ (MPT ဆင်းမ်ကဒ်အသုံးပြုသူ) မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် နေလ၀န်ဆောင်မှုကိုရယူထားသောသူများ(အသစ်/အဟောင်း)သည်ဤအထူးအစီအစဉ် တွင်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
၄။ Promotion ကာလသည် ၂၄ ဇန်န၀ါရီ ၂၀၁၉ မှ ၂၃ ဧပြီ ၂၀၁၉ အထိ (²Promotion ကာလ²) ဖြစ်ပါ သည်။
၅။ Promotionကာလအတွင်း ဆုရရှိသူများကို ကျပန်းရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် လစဉ်ကံစမ်းရွေးချယ်သွား မည်ဖြစ်သည်။ လစဉ်ဆုများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဒုတိယလ (၂၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉ မှ ၂၃ မတ် ၂၀၁၉) အတွက် ကျပ် (၁) သန်းတန် စိန်လက်စွပ် တစ်ကွင်း နှင့် ၃၀၀၀ကျပ်တန် MPT top-up ကဒ် ၁၀၀ တိြု့ဖစ်သည်။
တတိယလ (၂၄ မတ် ၂၀၁၉ မှ ၂၃ ဧပြီ ၂၀၁၉) အတွက် ကျပ် (၁) သန်းတန် စိန်လက်စွပ် တစ်ကွင်း နှင့် ၃၀၀၀ကျပ်တန် MPT top-up ကဒ် ၁၀၀ တိြု့ဖစ်သည်။
၇။ MPTနှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊မပတ်သက်သည်ဖြစ်စေMPTအတွက်လုပ်ကိုင် နေသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများသို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်ဆွေမျိုးများအပါအ၀င်MPT၏ ဝန်ထမ်းများPromotion တွင်ပါဝင်ကံစမ်းခွင့်မရှိပါ။
၁၀။ Promotion နှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုလျှင် ၀၉၈၉၉၈၄၀၀၀၇ သို့မဟုတ် ၀၉၄၂၀၈၀၅၆၆၇ သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
This page explains the terms by which you agree to abide by when participating in the “Nay La Initial Year Promotion” (“Promotion”). The Promotion can be accessed through services provided by Myanma Posts and Telecommunications (“MPT”, “we”, “us”, “our”). The Promotion is operated by and provided to you by Htut Co.,Ltd. By participating in the Promotion, you signify that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms and Conditions and any other applicable rules, policies and terms associated therewith (collectively, the “Terms”).
As mentioned above, the Promotion is fully operated by Htut Co.,Ltd. The scope of MPT’s involvement with the Promotion is limited to billing and subscription functions only, which will be further explained below.
All rights not expressly granted to you in the Terms are reserved and retained by us or our licensors, suppliers, publishers, rights holders, or other content providers. You may participate in the Promotion only as permitted by the Terms and by law; all other uses are strictly prohibited.
Your participation in the Promotion is subject to scheduled and unscheduled service interruptions. You agree that MPT will not be liable to you or any third parties for any interruption of the Promotion, downtime (planned or unplanned) or access failure.
MPT shall have no liability for your use or misuse of the Promotion, any interactions you have with other users, or any other act or omission by you with regard to the Promotion.
Except as otherwise rightfully operated by Htut Co.,Ltd. or any other third party, as applicable, any MPT proprietary material related to the Promotion, including, without limitation, software, images, text, graphics, illustrations, logos, patents, trademarks, service marks, copyrights, photographs, audio, videos, music, and content (collectively, “Content”), and all intellectual property rights related thereto, are the exclusive property of MPT and its licensors, suppliers, publishers, rights holders, or other content providers. Except as explicitly provided herein, nothing in the Terms shall be deemed to createalicense or right in or under any such intellectual property rights, and you agree not to sell, license, rent, modify, distribute, copy, reproduce, reverse engineer, transmit, publicly display, publicly perform, publish, adapt, edit or create derivative works from any materials or Content accessible on the Promotion. Use of the Content for any purpose not expressly permitted by the Terms is strictly prohibited.
The Promotion period is from 24 January 2019 to 23 April 2019 (“Promotion Period”).
In order to participate in the Promotion, you must subscribe to the Nay La service during the Promotion Period.
The Promotion is intended solely for select MPT registered users (usingaMPT SIM) who are at least eighteen (18) years of age.
Any individual or organization working directly or indirectly with MPT or its affiliates, including their family and relatives, are not eligible to join the Promotion.
7.Disclaimers of Warranties and Limitation of Liability
THE PROMOTION AND ALL INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) AND OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THEREIN ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS. MPT MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THE PROMOTION, OR THE INFORMATION, INCLUDING ITS ACCURACY, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) OR OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THE PROMOTION. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THE PROMOTION IS AT YOUR SOLE RISK.
MPT WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND ARISING FROM THE USE OF THE PROMOTION, OR FROM ANY INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) OR OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THROUGH THE PROMOTION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.
IN ENTERING THE PROMOTION, YOU AGREE TO HEREBY RELEASE AND FOREVER DISCHARGE MPT, AND TO INDEMNIFY MPT FROM ANY AND ALL CLAIMS, DEMANDS, RIGHTS, CAUSE OF ACTION OR ANY NATURE OR KIND, ARISING FROM AND BY REASON OF ANY AND ALL LOSS, INJURY, DAMAGE OR LIABILITY AND THE CONSEQUENCES THEREOF WHETHER DIRECT OR CONSEQUENTIAL IN CONNECTION WITH THE PROMOTION, REGARDLESS OF THE CAUSE THEREOF, AND EVEN IF MPT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY INJURY TO ANY PERSONS OR ANY DAMAGE CAUSED TO ANY PROPERTY WHILE PARTICIPATING IN THE CONTEST OR ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, THE USE OF THE PRIZE.
MPT DOES NOT WARRANT THAT THE PROMOTION, INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, PRODUCTS (INCLUDING SOFTWARE) OR OTHER SERVICES INCLUDED IN OR OTHERWISE MADE AVAILABLE TO YOU THEREIN, MPT SERVERS OR ELECTRONIC COMMUNICATIONS SENT FROM MPT ARE FREE OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS.
4. The Promotion period is from 24 January 2019 to 23 April 2019 (“Promotion Period”).
5. Winners will be selected randomly by lucky draw for each month of the Promotion Period. The prizes for each month are as follows:
2nd month (24 February 2019 to 23 March 2019), there will be one winner of one Diamond Ring that worth 1 million kyats and 100 winners of 3,000 kyats MPT top-up.
3rd month (24 March 2019 to 23 April 2019), there will be one winner of one Diamond Ring that worth 1 million kyats and 100 winners of 3,000 kyats MPT top-up.
1st month winners – 14 March 2019
10. You may contact 09899840007 or 09420805667 for detailed information about the Promotion.